Ndingafungisisa here chinyorwa? Kana Freddie Murphy ari muchivako, ndapota uyai kumusuo wapamberi. Mudzimai wako anoziva kuti uri pano. Dzokorora, Freddie Murphy mudzimai wako ari pano. Ndapota chibva kunze kwechivakwa ... iwe wakaneta! (yakagadzirwa) - NYE kuverengwa kweJs, Vjs, Nightclubs 2019